Waxaad ku mahadsan tahay in aad shaqo adag oo aad u plugin GREAT!
Waxaan aad rabto wax soo saarka ka weyn in this New 2015 Sanadka!
Oo anigu waxaan u malaynayaa in inta badan oo dhan ku heshiin doonaa ila, jeclaan lahaa inuu arko updates marar 😉
Thanks mar, iyo sugaynay arrintan muuqaalada laga cabsado!
Ka dhig kor u shuqulkii weynaa, Nin! Sidaas ku faraxsanahay, waxaan helay Transposh iyo sii wadaan in ay si kastaba ha ahaatee waxaad taageeri waxaan kartaa doonaa. Bravo!
Steen Grønfeldt sheegay
Tani waa ayaan aragto plugin markii ugu horeysay – Waa in aan ku siin Yeremyaah, waa arrin khiyaano! Waxa aan ka shaqeeyay sida turjumaan sanado badan, oo halkan in aan ka shaqeeyo ee la – isku dayi doonaa in aan abaalkooda u marinaya tarjumaadaha Danish ah bogga!